एकपटक रोपेपछि ५० वर्षसम्म फलदायी : यसरी गर्नुस् किवी खेती » Khulla Sanchar
एकपटक रोपेपछि ५० वर्षसम्म फलदायी : यसरी गर्नुस् किवी खेती
पहिला–पहिला नेपालको पहाडी जंगलमा पाइने ठेकी फल हो, किवी । जापानको रैथाने मानिने यो गुणकारी फललाई ‘किवी’ चराले चीन, नेपाल र न्युजिल्याण्ड र्पुयाएको मानिन्छ । किवीको सबैभन्दा ठूलो व्यावसायिक खेती पनि न्युजिल्याण्डमै छ । न्युजिल्याण्डबाट भारतमा मात्रै वार्षिक २ अर्ब अमेरिकी डलरको किवी आयात हुने गरेको बताइन्छ । स्वाद र गुणका कारण महँगो फलमा गनिएको किवी काठमाडौंको बजारमा प्रतिकेजी ५ सय रुपैँयाभन्दा बढी पर्दछ । उपयोग तथा औषधीय गुण फलको राजा किवीलाई यार्सागुम्बा र ग्यानोडार्मा च्याउ जतिकै औषधीय गुणयुक्त मानिन्छ । किवीलाई शक्ति बद्र्धक र क्यान्सरको औषधि मानिन्छ । किवीबाट रक्सी, ब्राण्डी, वाइन, जेली, वियर, जुस, जाम आदि बनाउन सकिन्छ । फल बाहेक किवीको जाम, जुस, जेली, वाइन, मासु ‘सफेनिङ्ग’ र कस्मेटिक सामग्री बनाउन सकिन्छ, जसको राम्रो मूल्य पाइन्छ ।
किवी खेतीको रोचक इतिहास
किवी पहिलो पटक नेपालमा अमेरिकी वैज्ञानिक नेथानियल वालिचले सन् १८२१ मा पत्ता लगाएका थिए । तर कतिपयले किवीलाई जापानी रैथाने फल भन्ने गरेका छन् । खासमा चीनको याङत्जे उपत्यका किवीको पितृभूमि हो । यो ठूलो झाङ हुने लहरा प्रजातिको काठयुक्त काण्डसहितको पतझड विरुवा हो । वास्तवमा नेपालको पहाडी जंगलमा पाइने ठेकी फल नै किवी हो । किवी चराले नेपाल लगायत विश्वका अन्य मुलुकमा यसलाई पु¥याएको मानिन्छ । चीनबाट विउ लगेर सर्वप्रथम सन् १९०६ मा पहिलो पटक न्यूजिल्याण्डमा किवी नर्सरीमा उमारिएको थियो । विउबाट उमारिएको विरुवाले सन् १९१० मा पहिलो पटक फल दियो । यसको व्यवसायिक खेती न्यूजिल्याण्डमा सन् १९४० बाट शुरु गरिएको थियो भने सन् १९७० सम्ममा त्यहाँ ९०० एकर क्षेत्रमा यसको खेती भइसकेको थियो । सन् १९६० पछि अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा किवीको व्यवसायिक खेती शुरु भयो । सन् १९७४ देखि किवले अन्तराष्ट्रिय पहिचान पायो ।
यसरी गरिन्छ किवी खेती
अहिले नेपालमा किवीको विरुवाको माग बार्षिक २५ देखि ३० हजारसम्म रहेको छ । रोपेको ५ देखि ७ वर्षमा किवी फल्न थाल्दछ । यसले लगातार ५० वर्षसम्म फल दिन्छ । उत्पादन हुने हावापानी किवीको व्यवसायिक खेतीका लागि उयुक्त हावापानी समुद्र सतहबाट १००० देखि २००० मिटरसम्मको उचाइ हो । तथापि उचित सिँचाइ र स्याहार सुसार पुगे समुद्री सतहबाट ८०० देखि २९०० मिटरसम्म यसको खेती गर्न सकिने विज्ञहरु बताउँछन् । प्राकृतिक रुपमा १६०० देखि २५०० मिटरसम्मको नेपालको पहाडी जंगलमा किवी पाइन्छ । हिउँद र सक्खा गर्मी मौसममा किवीलाई ंिसचाइको आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्दछ । माइनस २ डिग्रीसेन्टीग्रेड वा १० डिग्री फरेनहाइट भन्दा कम तापक्रम किवीले सहन सक्दैन । ५ देखि ६.८ पि.एच. भएको माटो विकीका लागि उपयुक्त मानिन्छ । एक बोट किवीलाई प्रतिवर्ष ५० केजी प्राङ्गरिक मल आवश्यक पर्दछ । विरुवा रोप्दाको दुरी(स्पेसिङ) ६×६ मिटर हुनु पर्दछ । प्रतिरोपनी १३ देखि १५ विरुवा रोप्नु राम्रो हुन्छ । कतिपयले प्रति रोपनी ५० बोटसम्म भनेका छन् । कम्तिमा एक बोट किवीलाई २०० वर्गफिट जमिन आवश्यक पर्दछ । उपोष्ण हावापानीमा हुने किवीले १० डिग्री फरेनहाइट भन्दा कम तापक्रम सहन सक्दैन । ब्अतयलष्मष्ब बचनगतब भन्दा ब्अतयलष्मष्ब मभष्अिष्यकब ले चिसो सहन सक्छ । उपयुक्त हावापानी भएको अवस्थमा २२० दिनमा किवी परिवक्व भएर पाक्दछ । ब्अतयलष्मष्ब बचनगतब जातको किवी अगष्टबाटैे अमेरिकाको साउथइस्टर्न क्यारोलाइनामा पाक्ने गरेको छ । नेपाली जंगलमा पाइने किवी कार्तिक–मंसिरमा पाक्ने गर्दछ । मार्च अन्तिमबाट पाउला पलाउने किवी मध्य मेमा फुल फुल्दछ । पोथी र भाले छुट्टाछुट्टै बोट हुन भएकोले दुबै खालको किवी रोप्नु पर्दछ । १० बोट पाथी बराबर १ बोट भाले आवश्यक पर्दछ । उत्पादन र बजारः किवीको पाक्ने समय सेप्टेम्बर र अक्टोबर हो ।
नेपालमा किवीको व्यवसायिक खेती
नेपालमा रैथानी किवी पाइएपनि खेती गरिएको एक्जोटिक प्रजाति हो । नेपालमा कहिले एक्जोटिक किवी भित्रियो एकीन छैन । केहीले सन् १९८१ मा पहिलो पटक एक्जोटिक किवी नेपाल भित्रिएको उल्लेख गरेका छन् । आलिसन र हे–टोमरी जातको किवी नेपालमा बढी लगाइएको छ । नेपालका दोलखा, काभ्रे, इलाम, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, ललितपुर, नुवाकोट, स्याङ्जा, ताप्लेजुङ आदि जिल्लामा किवीको व्यवसायिक खेती गरिएको छ । रोप्ने समय नर्सरीमा तयार गरिएको विरुवालाई पुष माघमा रोप्ने गरिएको छ । रोपेको ५ वर्षदेखि फल्ने किवीले लगातार ५० वर्षसम्म उत्पादन दिन्छ । एउट परिपक्व किवीको बोटले १०० देखि १५० केजीसम्म फल्छ । प्रतिबोटमा १०० केजीसम्म फल्ने नेपाली अनुभव छ । प्रतिबोट सामान्यतः रु.१५०००÷– भन्दा बढी आम्दानी हुने नेपाली किसानहरु बताउँछन् । नेपालको पाँचलाख हेक्टर पहाडी जमिनमा किवी खेती गर्ने हो भने वार्षिक रु. ५ अर्बको निर्यात गर्न सकिने विज्ञहरुको दावी छ । नेपालको १० लाख हेक्टर जमिन किवी खेतीका लागि उपयुक्त रहेको विशेषज्ञहरु बताउँछन् । पूर्वी नेपालमा अलैँचीलाई रोग लागेको बेला किवी खेती उत्तम दीर्घकालिन विकल्प हुने देखिन्छ । यो फल समुद्र सतहबाट ८०० देखि २००० मिटर उचाइको पहाडी क्षेत्रमा राम्ररी फलाउन सकिने बताइन्छ । यद्यपि, निर्यात योग्य किवी उत्पादनका लागि १००० देखि २००० मिटर उचाइको जमिन उपयुक्त मानिन्छ । यसले यो खेतीमा नेपालको सम्भावना पनि प्रष्ट पार्दछ ।
प्राकृतिक रुपमा नेपाली जंगलमा पाइने भएकाले किवी खेती गर्न माटो परीक्षण आवश्य पर्दैन । सामान्यतः रोपेको विरुवालाई तुसारोले भेट्नु हुन्न । कम्तिमा १ घनफिट गहिरो खाल्डोमा राम्रो कम्पोष्ट मल राखेर विरुवा लगाउनु पर्दछ । विऊ र कटिङ दुबै तरिकाले यसको वेर्ना उत्पादन गरिन्छ । विऊबाट तयार बृर्ना बैशाख–जेठमा रोप्नु उपयुक्त हुन्छ । रोप्दा विरुवा बीचको स्पेसिङ ६×६ फिटलाई उपयुक्त मानिन्छ । कम्तिमा ३ फिट उचाइ भएसम्म सिंगल टुप्पो हुने गरी कटनी गर्नु पर्दछ । त्यसपछि थाक्रोमाल लगाएर झ्याँगिन दिनु पर्दछ । समय समयमा आवश्यक गोडमेला, सिँचाइ, मल आदि आवश्यक हुन्छ । किवीमा खास रोग किरा अहिलेसम्म देखा परेको छैन । एक पटक रोपेको सात वर्षपछि फल्न शुरू गर्ने किवीले ६० वर्ष निरन्तर फल दिइरहन्छ । एक रोपनी जमिनमा ५० बोट रोप्न सकिन्छ भने एक बोटमा १०० केजीसम्म फल्छ । प्रतिरोपनी वार्षिक सरदर रु.१ लाख आय दिनसक्ने किवीसँगै बेसार, अदुवा, कुरिलोलगायतको मिश्रित खेती गर्न सकिन्छ । सरकारले आवश्यक प्रविधि, सिप, कर्जा र बजारको प्रवन्ध गर्नु हो भने पक्कै त्यो दिन टाढा छैन । किवीसँगै भित्रीबालीका रुपमा अदुवा, बेसार, कुरिलो, केरा, चिराइतो, सतुवा आदिको समेत खेती गर्न सकिन्छ ।